Aung's Investment: Rally on the Thin Ice
Rally on the Thin Ice
အချိန်မကုန်ခံချင်သောသူများအတွက် ဒီပထမစာကြောင်းပဲ ဖတ်ဖို့လိုမယ် - Take profit very soon. ဒီSeptemberလဆန်းကတည်းက စခဲ့တဲ့ Rallyဟာ တချို့နေ့တွေမှာ not-so-bad economic reportတွေပေါ်မှာ baseထားပြီး တက်လာတာဖြစ်ပေမယ့် အခုလကုန်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သံသယရှိချင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတာ အဓိကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။
QE II - buzz word of the month
QE II ဆိုတာ Quantitative Easing (second round)လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ QE Iကတော့ မနှစ်က တခါလုပ်ပြီးပါပြီ။ QEဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ Money printingကို စကားလှအောင်လုပ်ထားတာပါ။ US Federal Reserveဟာ USရဲ့ Second quarter growthနဲ့ အခုThird quarterမှာ ဖြစ်နေတဲ့ growthအပေါ်မှာ အားမရပါဘူးလို့ Fed meeting minutesတွေထဲမှာ ဆိုပါတယ်။ Consumer spending အားနည်းတာကြောင့် Inflationကိုအသာထားပြီး Deflationမဖြစ်ရအောင် စောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Government stimulus programတွေဟာ ထိရောက်မှု အားနည်းနေတာကြောင့် Fedဟာ ပိုက်ဆံရိုက်ထုတ်ပြီး ကိုယ့်အစိုးရBondကို ကိုယ်ပြန်ဝယ်ဖို့ Annouceလုပ်ပြီးသားပါ။ August meetingအပြီးတုံးက US Treasury Notesတွေ ထဝယ်လိုက်ပါသေးတယ်။ Treasuryတွေရဲ့ ပေါက်ဈေးဟာ သူတို့ဆီကရတဲ့ အတိုးနှုန်း (Yield)နဲ့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျပါတယ်။ လွယ်လွယ်မှတ်ချင်ရင်တော့ Treasury Demandများလေ၊ Yieldကျလေလို့ မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ Yieldဟာ Home Loan interest rateတွေကို directly အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Fedက ဖြစ်ချင်တာက သူတို့က Yieldတွေကျအောင် Treasuryတွေလိုက်ဝယ်မယ်၊ ဒါမှ Mortgage rateတွေ၊ Credit card rateတွေ ကျပြီး Consumer spendingကို Stimulateဖြစ်စေချင်တာပါ။ ဒါက ဖြစ်ချင်တာ၊ အခုဖြစ်နေတာတွေကို ဆက်ကြည့်ရအောင်။
Technicals - suddenly everyone hates USD
September 21မှာ Fedက Inflationဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ Growthအတွက် အားရလောက်တဲ့ Levelရောက်မနေပါဘူး၊ သူတို့ဟာ လိုအပ်သလို QEကို လုပ်ချင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ Fed meeting outcomeအနေဲ့ ထွက်လာပါတယ်။ ဒီသတင်းမထွက်ခင်ကတည်းက Hotနေတာကတော့ Goldပါ။ Gold December Futures contract ဈေးဟာ all-time high recordတွေကို တနေ့ပြီး တနေ့Brokeနေခဲ့တာ အခုထက်ထိကို မရပ်သေးပါဘူး။ ဘာလို့ Goldတက်ရသလည်းဆိုတော့ USDဟာ QEသတင်းကောလဟာလထွက်လာကတည်းက တန်ဖိုးကျနေခဲ့လို့ပါပဲ။ USDဈေးကျလေ၊ Foreign tradersတွေဟာ USDနဲ့ရှင်းရတဲ့ ရွှေအစရှိတဲ့Commoditiesတွေကို ပိုဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် QEဟာ နောက်ဆုံးတော့ Inflationဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ Actionဖြစ်လို့ အကောင်းဆုံး Inflation hedgeဟာ Goldပါပဲ။
ရွှေလိုပဲ၊ ဆက်တိုက်တက်လာတာကတော့ Euro Dollar, Aussie Dollar, Japan Yenအစရှိတဲ့ currencyတွေပါပဲ။ Exportကိုပဲအားကိုးရတဲ့ Japanလိုတိုင်းပြည်ဟာ Yenဈေးတက်တာ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Yenအတက်ကြမ်းလာလို့ Bank of Japan (BOJ)ဟာ Marketထဲမှာ Yenတွေ Billion, Trillionနဲ့ချီပြီး ဈေးကျအောင် ချရောင်းပါတယ်။ USDကိုလည်း လိုက်ဝယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိရောက်မှုကတော့ Limitedဖြစ်ပါတယ်။
Dow Jones Industrial Average, S&P500အစရှိတဲ့ Major Indexတွေဟာ အပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင်တော့ US Summer Trading Rangeကို ဖောက်ထွက်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်သံသယဖြစ်ရမှာက Does this rally deserve to continue? ကျွန်တော့်ရဲ့ Personal အမြင်ကတော့ "No". QEစကားထွက်လာရတာကိုက US Ecnonomyဟာ ထင်ထားသလောက် နာလန်ထူမလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Stock marketကတော့ Free moneyကို ကြိုက်တာပေါ့။ Liquidityများလေ၊ Wall Stဟာ အတိုးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ Fedဆီကယူပြီး Marketထဲမှာ များများဖြုန်းနိုင်လေပါပဲ။ အဓိက အဲဒီ့အချက်ကြောင့် ဒီRallyဟာ ဒီလောက်အထိသက်ဆိုးရှည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
So, what's the trade
အခုမှ ဒီRallyထဲကို ခုန်မဝင်ပါနဲ့တော့။ Too late. ကျွန်တော့်Analysisဟာ မှားနိုင်ပါတယ် - Free money affect can last long!!! ဒါပေမယ့် Dowဟာ 11,000ထက်တော့ သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလထဲမှာ ရယ်ရမှာက Economic reportတွေဟာ သိပ်လည်းမကောင်း၊ Fedက QEလုပ်ရလောက်အောင် အရမ်းလည်းမဆိုးရင် QEကို Priced-inလုပ်ထားတဲ့ Marketဟာ Sell-offစပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Bad dataထွက်လာတဲ့နေ့တွေမှာ Market မကျရင် မအံ့သြပါနဲ့။ Wall Stဟာ သူ့ပထွေး Bernankeက ပေးမယ့် ပိုက်ဆံရဖို့ သေချာလေ၊ ကြိုက်လေပါပဲ။
စောင့်ကြည့်ရမှာက ဒီQE euphoriaဘယ်လောက်ကြာအောင် ဆက်သွားမလည်းဆိုတာပါပဲ။ အချိန်တန်ရင်တော့ Marketဟာ Overboughtဖြစ်နေပြီ၊ တက်စရာလမ်းက Short-termမှာတော့ ကုန်နေပြီဆိုတာ သိလာကြတာနဲ့အမျှ Profit-takingကနေစပြီး Sell-off စပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အချိန်ဟာ Shortsတွေစလုပ်ရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့။
Market can be irrational longer than you can stay solvent
Posted by Aung Myo Htet at 9/27/2010 06:50:00 PM
Labels: alert, bull trap, correction, quantitative easing, technical analysis